Gudoomiye kuxigeenka ururka Xaqsoor ee Somaliland oo xiriyadiisa dib u helay. – Radio Daljir
Nofeembar 27, 2012 2:27 b 0
Awrboogays, Salaasa Nov 27, ?Wararka ka imaanaya degmada Awrboogays ee koonfurta gobolka Sanaag ayaa sheegaya in 14-qof oo uu ku jiro gudoomiye kuxigeenka urur siyaasadeedka Xaqsoor ee Somaliland Cali Maxamed (Cali Sandulle) ay xoriyadooda dib u heleen kadib markii laga qabtay Tuulada Qadan oo u dhaxaysa degmoyinka Xudun iyo Awrboogays ee gobolka Sool.
Xubnahan oo ay gacanta ?ku dhigeen dad reer guuraa ah oo hubaysan kuwaasoo kasoo horjeedda maamulka Somaliland ayaa markii danbe lagu wareejiyey maamulka Khaatumo, Waxaana xalay saqdii dhexe xoriyadooda loo sooceliyey dadkii la qabtay.
Kolkii la qabanayey Xubnahani ka tirsan ururka Xaqsoor ee maamulka Somaliland ayaa waxay isku dayeen inay baxsadaan waxaana lagu eryadey baabuur kuwa dagaalka ah iyadoo uu qalibmey mid kamid ah gaadiidkii ay xubnaha Somaliland wateen halka mid kalena lasoo qabtay isagoo bedqaba.
Gobolka Sanaag iyo deegaano ka tirsan Bariga fog ee gobolka Sool waxaa ka taagan dhaq dhaqaaqyo siyaasadeed oo aad u badan kuwaasoo yimid kadib markii maamulka Somaliland sheegay inay codbixinta golayaasha deegaanku ?ka dhici doonto, goboladda Sool, Sanaag bari & Hayland.
Caawa iyo Daljir, Isniin Nov 26-2012, Maxamed Cabdilaahi Cali (Kooshin) _Daljir Garoowe.